Maamulka islaamiga ah ee degmada balacad oo maanta xukun xad ah ku fuliyay labo ruux oo lagu soo qabtay falal xatooyo ah. | Halganka Online
Maamulka islaamiga ah ee degmada balacad oo maanta xukun xad ah ku fuliyay labo ruux oo lagu soo qabtay falal xatooyo ah.
Posted on Luulyo 16, 2010 by halganka
Maamulka degmada balcad ee wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe ayaa maanta xukun xad ah waxay ku fuliyeen labo ruux oo kamid ah dadku ku dhaqan magaalada balcad,kuwaasi oo lagu helay falal xatooyo.
Boqolaal ruux oo kamid ah dadku ku dhaqan magaalada balcad ayaa isugu soo baxay fagaare ku yaala degmada si ay udaawadaan xukunka xadka ah ee lagu fuliyay labo wiil oo dhalinyaro ah oo lagu soo eedeeyay inay jabsadeen dukaamo ku yaala tuulooyin udhow degmada balcad.
Sheekh yuusuf Xasan barrow oo kamid ah garsoorayaasha gobolka shabeelaha dhexe ayaa goobta ka hadlay,wuxuuna sheegay in xukunkaas islaamiga ah uu yahay mid alle lagu raali gelinayo maadaama,uu kamid yahay xad kamida ah xuduudihiisa.
Xasan Axamed Cumar oo 18 sano jir ah oo ka mid ahaa labadii dhalinyaro ee xadka lagu fuliyay ayaa laga gooyay gacanta midig kadib markii maxkamadda horteeda uu ka qirtay in 45,000,000 oo shilin soomali ah uu ka dhacay dukaan ku yaala tuulada xawaadlay ee udhow degmada balcad.
Murshid Axmed Aadan oo 22 sano jir ah ayaa isna laga gooyay gacanta midig,kadib markii maxkamadda horteeda uu ka qirtay in lacag dhan 2,000,000 uu ka dhacay dukaan ku yaala deegaanka basra ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe sida uu ku waramay Alqaadi Sheekh yuusuf barrow.
Si kastaba ha ahaatee wilaayaatka islaamiga ah ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa waxaa inta badan laga fuliyaa xuduudaha noocaan oo kale ah,iyadoona dadkuna ay si aad ah usoo dhaweeyeen inta la fuliyo xuduudaha Allah.
« Kulan aad u balaaran oo ka dhacay Tuulada “ Buulalloow” oo ka tirsan Wilaayada Islaamiga ah ee Shabellaha Hoose. Idaacad Islaami ah oo markii ugu horeysey shalay laga hirgeliyay Wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud. »